NuBits စျေး - အွန်လိုင်း NBT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NuBits (NBT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NuBits (NBT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NuBits ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NuBits တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NuBits များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NuBitsNBT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0627NuBitsNBT သို့ ယူရိုEUR€0.0531NuBitsNBT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0479NuBitsNBT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0571NuBitsNBT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.56NuBitsNBT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.396NuBitsNBT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.39NuBitsNBT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.234NuBitsNBT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.083NuBitsNBT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0877NuBitsNBT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.39NuBitsNBT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.486NuBitsNBT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.336NuBitsNBT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.69NuBitsNBT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.58NuBitsNBT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.086NuBitsNBT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0959NuBitsNBT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.95NuBitsNBT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.436NuBitsNBT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.69NuBitsNBT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩74.37NuBitsNBT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦24.28NuBitsNBT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.6NuBitsNBT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.72
NuBitsNBT သို့ BitcoinBTC0.000005 NuBitsNBT သို့ EthereumETH0.000163 NuBitsNBT သို့ LitecoinLTC0.00115 NuBitsNBT သို့ DigitalCashDASH0.00069 NuBitsNBT သို့ MoneroXMR0.000704 NuBitsNBT သို့ NxtNXT4.89 NuBitsNBT သို့ Ethereum ClassicETC0.00924 NuBitsNBT သို့ DogecoinDOGE18.08 NuBitsNBT သို့ ZCashZEC0.000761 NuBitsNBT သို့ BitsharesBTS1.93 NuBitsNBT သို့ DigiByteDGB2.01 NuBitsNBT သို့ RippleXRP0.223 NuBitsNBT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00216 NuBitsNBT သို့ PeerCoinPPC0.208 NuBitsNBT သို့ CraigsCoinCRAIG28.55 NuBitsNBT သို့ BitstakeXBS2.67 NuBitsNBT သို့ PayCoinXPY1.09 NuBitsNBT သို့ ProsperCoinPRC7.86 NuBitsNBT သို့ YbCoinYBC0.00003 NuBitsNBT သို့ DarkKushDANK20.11 NuBitsNBT သို့ GiveCoinGIVE135.73 NuBitsNBT သို့ KoboCoinKOBO14.28 NuBitsNBT သို့ DarkTokenDT0.0577 NuBitsNBT သို့ CETUS CoinCETI181